Ahoana ny fomba hiainana amin'ny fomba mahasalama amin'ny fomba fiaina mipetrapetraky ny mpamorona sary | Famoronana an-tserasera
Isika angamba dia iray amin'ireo matihanina mandany ora be indrindra isan'andro mipetraka eo alohan'ny solosaina. Ary ny ankamaroan'ny asantsika dia novolavolaina isam-batan'olona, ​​tao amin'ny studio ary lavitra ireo vahoaka marobe, zavatra iray izay tsy hafahafa. Mba hahafahana manao tsara indrindra dia ilaina ny ahitantsika ny tenantsika ao amin'ny toeram-piasana mahafinaritra sy manintona, izay mora ho antsika ny mifantoka ary ambonin'izany rehetra izany dia manome fampiononana ho antsika.
Ny toerana hijoroantsika isan'andro dia zava-dehibe ary ny tsy firaharahiantsika azy dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana. Ny fahadiovana aorian'ny paositra dia zavatra izay tsy maintsy dinihintsika rehetra, noho ny asantsika, amin'ny toerana mitovy amin'izany mandritra ny fotoana maharitra. Ny ankamaroan'ny disfunction vertebral sy ny fanovana dia vokatry ny fananganana toerana tsy mendrika sy fanerena ny vatantsika hijanona amin'ny fomba tsy voajanahary. Ho fanampin'izany, zava-dehibe ny fahafantarantsika fa ireo tsy fanarahan-dalàna ireo dia tsy vitan'ny fiovan'ny vatantsika fotsiny, fa ny antony ara-pihetseham-po ihany koa. Ny fihenjanana, ny fanahiana na ny fitaintainanana dia hita taratra amin'ny vatantsika ary miteraka fihenjanana maharitra izay tsy salama. Izany no antony hanokananay anio ny lahatsoratra ity mba hanomezana anao torohevitra vitsivitsy momba ny fanamboarana ireo olana ireo sy hamahana azy ireo amin'ny fomba mahasalama sy mahomby indrindra.
1 Aza miala sasatra ary manokana ora farafahakeliny adiny iray isan'andro handehanana na hanao fanatanjahan-tena
2 Mijanona tsara hatrany ary miezaha mitantana adin-tsaina
3 Safidio tsara ny fanaka ho an'ny biraonao na ny fianaranao
4 Tandremo ny sakafonao
5 Misy fiainana ankoatry ny asa!
Aza miala sasatra ary manokana ora farafahakeliny adiny iray isan'andro handehanana na hanao fanatanjahan-tena
Hippocrates dia nilaza fa ny zavatra rehetra anananao sy ampiasainao dia miafara amin'ny fivelarana, ary izay rehetra anananao nefa tsy ampiasainao dia miafara amin'ny fisintomana. Azontsika atao ny miresaka momba ny fomba fiaina mipetrapetraka toy ny tsy fisian'ny fampihetseham-batana amin'ny fomba mahazatra sy mitohy izay mitranga rehefa mandany latsaky ny 30 minitra isan'andro manao fanazaran-tena ary latsaky ny telo andro isan-kerinandro. Rehefa mitranga izany ary maharitra elaela dia manimba tokoa ny vokany, tadidio fa ny olombelona dia mila manao fanatanjahan-tena ary mihetsika mba hijanona amin'ny toe-piainana tsara indrindra. Ny olana ateraky ny fomba fiaina mipetrapetraka dia matotra kokoa noho ny iray mirona hieritreritra ary mazava ho azy fa miverina amin'ny toe-tsaina sy ara-tsaina ihany koa izy ireo.
Mijanona tsara hatrany ary miezaha mitantana adin-tsaina
Imbetsaka izany dia mety ho lasa utopia, indrindra rehefa mila manatanteraka tetikasa maro miaraka isika. Amin'ireto tranga ireto dia miezaha mitady fomba hafa toy ny fanemorana ny daty fanaterana ary raha sanatria tsy misy izany dia tadidio fa tsy mamaha n'inona n'inona na oviana na oviana ny nervez, fa vao maika mamorona olana ary manakana ny gadona asanao.
Safidio tsara ny fanaka ho an'ny biraonao na ny fianaranao
Ny seza ipetrahanao matetika dia tena zava-dehibe, tadidio fa handany 95% amin'ny ora fiasanao ianao amin'izany. Betsaka ny seza birao izay manana vahaolana ergonomika ary mifanaraka tanteraka amin'ny filantsika sy ny toerana misy antsika. Zava-dehibe ny fananantsika izay azo fehezina sy azo ovaina arak'izay azo atao. Miezaha mitady seza ahafahanao manova ny fironan'ny lamosina (raha azo atao dia tokony hikaroka iray izay manana backrest modular azo ovaina amin'ny fihenan'ny hazondamosina), ny haavony ary misy sandry. Ireto misy ohatra amin'ny seza mampiadana sy manintona izay mety amin'ny mpamorona sary sy matihanina hafa toa anay mandany fotoana maharitra hipetrahana amin'ny birao:
Tandremo ny sakafonao
Raha manery anao handany ampahany betsaka amin'ny fotoananao eo alohan'ny solosaina ny asa dia miezaha tsy hanao an-tsirambina farafaharatsiny ny sakafonao. Hamarino tsara fa ny sakafonao dia manankarena amin'ny karazan-tsiranoka rehetra ary ialao ny sakafo haingana araka izay tratra.
Misy fiainana ankoatry ny asa!
Indrindra ireo mpandraharaha sy mpiasa tsy miankina dia tototry ny filan'ny orinasany ary manandrana mamokatra be amin'ny fiheverana ny ora fiasana be loatra. Ny marina dia naseho fa raha mahafoy ny fotoana fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra isika, dia tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamantsika io, fa hisy akony koa amin'ny taham-pamokarana. Mety hanjary tsy hamokatra io ary raha 90% amin'ny fotoananao ny asa dia manana olana ianao. Aza mahafoy ny fotoananao ary manararaotra azy ireo hanao zavatra tianao miala sasatra tsotra izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba hiainana amin'ny fomba mahasalama amin'ny fomba fiaina mipetrapetraky ny mpamorona sary